Man City oo laga cirib tiray tartanka Carabao Cup, xilli Liverpool ay u gudubtay wareega xiga ee siddeed dhammaadka… +SAWIRRO – Gool FM
(England) 27 Okt 2021. Kulammo ka tirsan wareega 16-ka ee tartanka Carabao Cup ayaa caawa laga ciyaaray dalka Ingiriiska iyadoo kooxiihii ugu badax fiiqnaa ee caawa ciyaaray ay ahaayeen Liverpool, Manchester City, Tottenham, iyo Leicester City.
Kooxda Liverpool ayaa iska xaadirisay wareega siddeed dhammaadka ee tartanka tartanka Carabao Cup, kaddib markii ay 0-2 kaga adkaatay naadiga Preston North End, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaha kala ah Minamino iyo D. Origi.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa ka gudabtay imtixaanka Burnley, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-1, waxayna iska xaadirisay wareega xiga ee tartankan, iyadoo goolka qura uu dhaliyay Lucas Moura.
Kooxda West Ham United ayaa ka ciribtirtay tartanka Carabao Cup kooxda Manchester City, kaddib markii ay kaga adkaatay rigoorooyin 5-4 ah.
Si la mid ah Leicester City ayaa jaratay tikitkeeda wareega siddeeda ee tartanka Carabao Cup kadiib markii ay ku garaacday kooxda Brighton and Hove Albion rigoorayaal 4-2 ah, halka Brentford 2-1 kaga adkaatay Stoke City.